Mpanamboatra sy mpamatsy gitara tsipika China. ROC
Fampiasana trano / baoritra
Fampiasana manokana hafa
OSB (tabilao vita amin'ny kofehy miorina)
ROCPLEX miondrika amin'ny plywood tadiavinao.
Manampia famolavolana vaovao amin'ny tetikasanao hazo miaraka amin'ny ROCPLEX Bending Plywood.
Ity tabilao mahavariana mahavariana ity dia hamorona saika ny kontour rehetra miolaka. Ny fahaizany mivezivezy amin'ny torolàlana lava-voa na hazo fijaliana dia lasa tontonana marobe amin'ny endrika sarotra.
Ao amin'ny tranokalan'ny asa, ny takelaka miondrika ROCPLEX dia azo rakofana laminate na valizy tohanan'ny taratasy ho an'ny endrika vita ilainao. Io no vahaolana tonga lafatra ho an'ny tsanganana miolikolika, ny tohany, ny arimoara ary ny fanaka amin'ny sehatry ny trano na ara-barotra… na aiza na aiza no irina fialana amin'ny sisiny mahitsy.
ROCPLEX miondrika hazo fisaka famaritana
Fanamboarana ply 3: tarehy mavo voahodidin'ny Rotary sy ny lamosiny. Tarehy veneer mahia.
Fanamboarana ply 5: Tarehin-kazo voahodidin'ny Rotary sy ny lamosiny. Ply anatiny anatiny.
Hateviny: 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm na mifandraisa aminay amin'ny habe hafa.
Haben'ny tontonana: voamadinika 4 'x 8' na varimbazaha 8 'x 4'.
Tariby ambany indrindra: 12 ″ Mety ho afaka hihena kely kokoa, nefa mila hery lehibe. Ny ampahany amin'ny singa rehetra dia tokony "aolaka" amin'ny tanana mba hahatratrarana fetra faratampony.
Sanding: ny takelaka dia mety mitaky sanding amin'ny tranokala.
Fampiharana: Ampiasao amin'ny fampiharana miolakolaka izay hosaronan'ny laminate, veneer tohanan'ny taratasy na faritra matevina hafa. Ny panels dia tsy natao hampiasa struktural na ivelany.
Tsy misy formaldehyde: Namboarina tamin'ny teknolojia PureBond miorina amin'ny soja.
ROCPLEX bending plywood no tontonana miovaova ho an'ny rindran-damina maro izay tsy ataon'ny tsipika mahitsy. Ny fahamendrehana mahavariana an'ny tontonana ROCPLEX dia mahatonga azy io ho vahaolana tsara ho an'ny:
Volavola fanaka boribory
Faran'ny kabinetra miolaka na nosy
Toeram-piasana fandraisana sy birao
Arches sy casings arched
Fitaovana sy tsanganana rindrina boribory
8 × 4 ′ hiondrika barika
4 × 8 ′ voninkazo lava miolaka
Vato filokana Veneer manify
* Hery mahery miondrika sy fihazonana hoho matanjaka.
* Tsy misy ady na vaky, kalitao tsy miova.
* Fanamafisana ny hamandoana sy fanamboarana tery. Tsy misy ratten na lo.
* Famoahana formaldehyde ambany.
* Mora fantsika, nahita nanapaka sy nandavaka. afaka manapaka vato amin'ny endrika isan-karazany arakaraka ny filan'ny fananganana.
* Ny plywood dia namboarina tamin'ny hazo tena izy.
ROCPLEX miondrika mitaingina gitara ary mitondra
Noho ny fahazoana ara-pitaovana sy ny fahaizan'ny fikosoham-bary, ROCPLEX dia azo atolotra amin'ny famaritana kely hafa amin'ny faritra manokana. Azafady mba zahao miaraka amin'ny solontenanao eo an-toerana mba hanamafisana ny fanolorana vokatra ao amin'ny faritra misy anao.
Mandritra izany fotoana izany koa izahay afaka manome anao ny formwork systerm kojakoja, plywood ara-barotra, horonantsary miatrika gitara sns.
Manampahaizana manokana izahay amin'ny famatsiana trondro antislip.
Mba miangavy re Mifandraisa amin'ny ekipan'ny varotra anay raha mila fanazavana fanampiny amin'ny antsipiriany momba ny plywood sinoa.
Previous: Rocplex Antislip Film Niatrika gitara
Manaraka: Kitapo ara-barotra